မောင်လင်းဝေ| December 8, 2011 | Hits:146
| | ချန်ပီယံလိဂ် ရှုံးထွက် နောက်အဆင့်မှာ ဆက်လက် ကစားဖို့အဆင်သင့် ဖြစ်နေတဲ့ အသင်းတွေမှာ အင်္ဂလန်က အာဆင်နယ်၊ အီတလီက အင်တာမီလန်နဲ့အေစီမီလန်၊ စပိန်က ဘာစီလိုနာနဲ့ရီးရဲယ် မက်ဒရစ်၊ ဂျာမဏီက ဘေယန်မြူးနစ်။ ဆိုက်ပရပ်က အပိုနီတိုးရှား၊ ရုရှားက ဇင်းနစ်၊ ဟော်လန်က အေဂျက် စတဲ့ အသင်း (၉) သင်းက အုပ်စုလိုက် ဇယားထိပ်တွေမှာ ရှိနေတဲ့အတွက် နောက်တဆင့် တက်ခွင့်ရပြီးတဲ့ အသင်းတွေလို့ ပြောရမှာပါ။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> P.T.A December 9, 2011 - 11:06 am	Man City didn’t play their last game away from home, and Ajax Amsterdam from Holland didn’t qualify either. I think it’s better for the writer to get his/her facts right to respect the readers. This article is not something difficult to compose.